Abahlukile Green Lake: izwe ngaphansi kwamanzi phakathi Austria
Kukholakala ukuthi izimangaliso kwamanzi ngesidingo ukuya endaweni ethile ukuphela kwezwe, ogwini ocean naseziqhingini angavamile. Futhi bambalwa abantu bazi ukuthi ngalo kanye elaseYurophu, kukhona ehlukile Green Lake, ukuhlinzeka abalandeli ikhambo kwamanzi ithuba eliyingqayizivele bahlanganyele wokuzilibazisa esithandayo.
Phenomenon entabeni Styria
Austria - a owaziwa Central izwe laseYurophu nge ukuphila kwakhona kusezingeni eliphezulu, edolobheni elidala nezinye ezikhangayo. isifundazwe Wakhe Styria idume emhlabeni wonke ka amachibi asezintabeni, lapho eze ngenjabulo uphumule entabeni abathandi ezokuvakasha kanye izintaba.
Phakathi Hohshvabskih ezintabeni, eduze edolobheni elincane elibizwa ngokuthi Tragoss, nenxenye engamakhulu amakhilomitha kusuka Vienna, kuyinto echibini engaqondakali ngokuthi Gruner See. Zonke ekwindla, ebusika kanye iningi entwasahlobo, kuba echibini cute futhi lincane kakhulu. Engxenyeni kwangempela kukholamu amanzi akuyona amamitha angaphezu kwamabili, futhi ukujula avareji - futhi ngesinye. Duzane ngobugebengu epaki ethokomele nge amabhuloho, amabhentshi ukhululekile, flowerbeds amahle izihlahla ubudala. Kulezi izinyanga, Green Lake (izwi nezwi ukuhunyushwa igama layo kusukela German) - indawo ozithandayo izakhamuzi ukuhamba kanye nezinsuku romantic.
Uhlobo ehluke ngokuphelele yokusebenzisa leli emanzini uthola ekupheleni Meyi. Ezintabeni, okuyinto lizungezwe Green Lake, snowmelt okusheshayo iqala. Amanzi Phansi emithambekeni yezintaba waphuphuma bakha ingxenye enkulu yabamemezeli esigodini. Ukujula Gruner Bheka e ophanayo ikakhulukazi eminyakeni iqhwa lakhuphuka lafika ku-12 metres. Yonke epaki ingaphansi kwamanzi: ngisho umqhele izihlahla musa Tower phezu efekethisiwe wakhe.
Ngesikhathi Green Lake ligcwala, utshani yaleli paki isikhathi sokuthola zasemazweni alpine. Ngenxa yalokho, amanzi alo ucebile Emerald luhlaza: awunika igama lwechibi. Futhi amanzi ahlanzekile ukuze echibini isabonakala phansi futhi kusukela ogwini kuya ogwini.
Ngokulinganayo wazibonakalisa ngokuyisimangaliso edonsela abatshuzi kusuka emhlabeni wonke. On the Green Lake kuze kube sekupheleni kuka-July, lapho amanzi aqala ukubohla, woza abatshuzi abafisa ukubhukuda futhi ukuhlala ebhentshini ngaphansi kwesihlahla, ubukele izinhlanzi ezibhukuda by. Kukhona ayihlomele dive isikhungo, imishini sokuqasha diving. Nokho, esikoleni diving akunjalo ngama abatshuzi ngempela zidinga isitifiketi.
I namachibi amahle kakhulu emhlabeni, ngokuvumelana-Wall Street Journal
Lenani Austria - kuyinto echibini eyingqayizivele emhlabeni hhayi kuphela. Umagazini Famous uncoma zilingana nezinhlobo Gruner See Polish ukuvakashelwa Morskie Oko ku Tatras - okusobala, uzungezwe izintaba futhi enhle kuzo zombili ihlobo nobusika.
Kuvele emehlweni ezithakazelisayo iyona Lake Powell futhi e-United States. Naphezu umsuka yokufakelwa, kuyafaneleka ukunaka kwethu: nalokho bhá amanzi nombala oluhlaza ehlane ezizungezile idwala iyamangalisa.
Emangalisa waqaphela futhi Swiss Lake Lucerne. Amanzi ke liyefana ngokuphelele umbala ngokugcwalisa naseCaribbean. Ngaphezu kwalokho, leli chibi nokuntula zom masimu, ifakwe amabhuloho lasendulo futhi chibi engavamile kakhulu. Ngaphandle Green Lake itholakala umnyango cishe esilandelayo. With Schengen visa, kuzodingeka isikhathi iholidi ukujabulela la ubuhle.
Lokho izitshalo ukusuka enhlabathini Sibutsetelo
Ngiziphi iinlwana azikwazi ukubhukuda emanzini?
Salix purpurea kwezokwelapha ingadi
Umhla wezinsuku eqoqweni le-GEF. Ukuvocavoca, ukuhamba, amahora athule, imidlalo
Magnolia izimbali. Isondlo, ukubuyabuyelela
Uhambo lokuya nokubuya Minsk ngo-Okthoba: Ikhambo Tips
Indlela ukhule ube garlic ezinkulu ebusika? Izinhlobonhlobo best of garlic ebusika
Kanjani futhi ngaphansi kwaziphi zinhlobo futhi yini aphathe psoriasis?
Crazy Love noma ukuziphatha?